October 2018 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Guitar ကြိုးညှီမယ့်-Tuner - DaTuner (Lite!) v3.81 APK for Android
Guitar ကြိုးညှီတဲ့ဆော့ဝဲ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါကျနောလို့ဂီတာနည်းနည်းတီးတတ်ပြီး ကြိုးသေချာမညှီတတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ရော&ညှီတတ်ပြီးသားသူေ...
Guitar ကြိုးညှီမယ့်-Tuner - DaTuner (Lite!) v3.81 APK for Android Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:59 PM Rating:5Guitar ကြိုးညှီတဲ့ဆော့ဝဲ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါကျနောလို့ဂီတာနည်းနည်းတီးတတ်ပြီး ကြိုးသေချာမညှီတတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ရော&ညှီတတ်ပြီးသားသူေ...
ချက်ပြုတ်နည်း အထွေထွေ ဖုန်းဆော့ဝဲ
အိမ်ရှင်မတွေလိုအပ်မယ့် ချက်ပြုတ်နည်းအမျိုးစုံပါရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတင်ပေးလိုက်တယ်။လိုချင်ရင်တော့ အောက် ပါလင့်မှ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ...
ချက်ပြုတ်နည်း အထွေထွေ ဖုန်းဆော့ဝဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:59 PM Rating:5အိမ်ရှင်မတွေလိုအပ်မယ့် ချက်ပြုတ်နည်းအမျိုးစုံပါရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတင်ပေးလိုက်တယ်။လိုချင်ရင်တော့ အောက် ပါလင့်မှ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ...
ဖမ်းထားတဲ့ကိုယ့်အသံကို အသံအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ - Voice changer with effects v3.4.10 APK For Android
ကိုယ်ဖမ်းထားတဲ့အသံကို အသံအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Voice changer with effects v3.4.10 APK နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါ။အသုံးပြုနည်းကိုေ...
ဖမ်းထားတဲ့ကိုယ့်အသံကို အသံအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ - Voice changer with effects v3.4.10 APK For Android Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:59 PM Rating:5ကိုယ်ဖမ်းထားတဲ့အသံကို အသံအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Voice changer with effects v3.4.10 APK နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါ။အသုံးပြုနည်းကိုေ...
သီလ ပါဠိတော် နှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖုန်းဆော့ဝဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် သီလ ကိုအလွယ်တကူ နာကြားရွတ်ဖတ် စောင့်ထိန်း ပူဇော် နိုင်စေရန် ရေးသားထားသော App ဖြစ်ပါသည်။ သာသနာတော်အတွက် အကျိုးပြု...
သီလ ပါဠိတော် နှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖုန်းဆော့ဝဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:58 PM Rating:5ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် သီလ ကိုအလွယ်တကူ နာကြားရွတ်ဖတ် စောင့်ထိန်း ပူဇော် နိုင်စေရန် ရေးသားထားသော App ဖြစ်ပါသည်။ သာသနာတော်အတွက် အကျိုးပြု...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:58 PM No comments:
iCloud ရှိ မရှိစစ်ဆေးနည်း ================ - iCloud ဆိုတာကတော့ Apple Company ကနေပြီးတော့ သူတို့၏ Product တွေဖြစ်သည့် iPhone, iPad ...
iPhone & iPad များတွင် iCloud ၀င်ထားခြင်းရှိ မရှိစစ်ဆေးနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:46 PM Rating:5iCloud ရှိ မရှိစစ်ဆေးနည်း ================ - iCloud ဆိုတာကတော့ Apple Company ကနေပြီးတော့ သူတို့၏ Product တွေဖြစ်သည့် iPhone, iPad ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:46 PM No comments:
Window7Genuငne ဆိုင်ရာ
Window7မှာ Genuine ပြသနာအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်း
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့တော့ Windows7ကိုအသုံးပြု နေကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် မသိမဖြစ် မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Window Genuine ဆိုင်လေးကို အားလုံး...
Window7မှာ Genuine ပြသနာအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:32 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့တော့ Windows7ကိုအသုံးပြု နေကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် မသိမဖြစ် မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Window Genuine ဆိုင်လေးကို အားလုံး...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:32 PM No comments:
Windows7All Version အတွက် Activator WAT Remover Tools All Version အားရယူနိုင်ပါပြီ
မင်္ဂလာပါ ဟိုတစ်နေ့က ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရောက်လာတယ် သူ့ကွန်ပျူ တာက Activate မဖြစ်တော့ပဲ Genuine ဖြစ်နေတော့ ကွန်ပျူ တာကသုံးနေရင်းကနေ ပြု တ်က...
Windows7All Version အတွက် Activator WAT Remover Tools All Version အားရယူနိုင်ပါပြီ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:30 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ ဟိုတစ်နေ့က ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရောက်လာတယ် သူ့ကွန်ပျူ တာက Activate မဖြစ်တော့ပဲ Genuine ဖြစ်နေတော့ ကွန်ပျူ တာကသုံးနေရင်းကနေ ပြု တ်က...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:30 PM No comments:
ကွန်ပျူတာ 7, 8, 8.1, 10 များမှာ Myanmar Font & Keyboard အမှန်ပုံသေထည့်နည်း 100% Working Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:02 PM Rating:5Windows & Myanmar Font & Keyboard ကိစ္စအတွက် ကွန်ပျူတာလေ့လာခါစ ညီအကိုတွေအတွက် မရှင်းရှင်းဖြစ်နေလို့ ဒီနေ့တော့ ရေးတင်လိုက်ပါပြီ။...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:02 PM No comments: